Isinyithi esandisiweyo sinokuhlulwa ngokweendidi ezahlukeneyo ngokokusetyenziswa kwaso, njengokuphakama kweplatifomu, izigqubuthelo zokhuselo zoomatshini, iingcingo zohola wendlela, iingcingo zikaloliwe, ukhuseleko kwithambeka lesiseko, umhombiso wangaphakathi, iisilingi, oomatshini ...
Umnatha wocingo lwentsimbi ongenasici njengangoku yeyona nto ixhaphakileyo, isetyenziswa ngokubanzi, kwaye inkulu kakhulu ngocingo lwesinyithi kwintengiso. Le idla ngokubizwa ngokuba enemingxuma insimbi ubukhulu becala ibhekisela insimbi ephothiweyo womluki. Okokuqala, masiqonde impembelelo ye-elem ephambili ...
Zininzi iintlobo zocingo kunye nezinto ezahlukeneyo zokwenza izinto. Loluphi uhlobo locingo olulungele wena? Ke ngoko, kufuneka siziqonde iindidi kunye neempawu zeminatha yocingo esetyenziswa ngokuxhaphakileyo, ukuze sikwazi ukukhetha esiza kuyisebenzisa. Okulandelayo, udade womgcini uya kuthetha ngeentlobo kunye neempawu ...